အသည်းရောင်အသားဝါ အေရောဂါကာကွယ်ဆေး - ဝီကီပီးဒီးယား
အသည်းရောင်အသားဝါ အေရောဂါကာကွယ်ဆေး (အင်္ဂလိပ်: Hepatitis A vaccine)သည် အသည်းရောင်အသားဝါ အေရောဂါကို ကာကွယ်ပေးသည့် ကာကွယ်ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ဤကာကွယ်ဆေးသည် (၉၅)ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကို ကာကွယ်မှုပေးနိုင်သည်။ ဤကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးနောက် အနည်းဆုံး(၁၅)နှစ်မှ ဘဝတစ်သက်လုံးအထိ ကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။ ဤကာကွယ်ဆေးကို နှစ်ကြိမ်ပေးရပြီး ပထမအကြိမ်ကို ကလေးအသက်(၁)နှစ်တွင် ပေးရသည်။ ဤကာကွယ်ဆေးကို ကြွက်သားထဲသို့ ထိုးနှံရသည်။
အသည်းရောင်အသားဝါ အေရောဂါအသင့်အတင့်ဖြစ်ပွားသောနေရာများတွင် ဤကာကွယ်ဆေးကို ကျယ်ပြန့်စွာပေးရန် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှ အကြံပြုထားသည်။ ရောဂါအဖြစ်များသောနေရာများတွင်တော့ လူများအားလုံးနီးပါးသည် ကလေးဘဝထဲက ရောဂါကူးစက်ခံခဲ့ရပြီး ခုခံအားရရှိခဲ့နိုင်သောကြောင့် ကျယ်ပြန့်စွာကာကွယ်ဆေးပေးရန် မလိုအပ်ပါ။ အမေရိကန်နိုင်ငံ ရောဂါကာကွယ်ရေးနှင့်တိုက်ဖျက်ရေး ဗဟိုဌာန၏ အကြံပြုချက်မှာ ရောဂါကူးစက်ခံနိုင်ရခြေရှိသော ကလေးများနှင့် လူကြီးများအားလုံးကို ဤကာကွယ်ဆေးထိုးသင့်သည်။
အသည်းရောင်အသားဝါ အေရောဂါကာကွယ်ဆေးကြောင့် ပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်လေ့မရှိပါ။ ကာကွယ်ဆေးထိုးခံရသော ကလေးပေါင်း(၁၅)ရာခိုင်နှုန်းခန့်နှင့် လူကြီးတစ်ဝက်ခန့်၌ ဆေးထိုးသည့်နေရာတွင် နာကျဉ်ခြင်းဖြစ်တတ်သည်။ ဤကာကွယ်ဆေးအများစုမှာ အသက်မရှိတော့သော ရောဂါပိုးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော်လည်း အချို့မှာ အသက်ရှိသော်လည်း အားပျော့သည့်ရောဂါပိုးပါဝင်သည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေသူများနှင့် ကိုယ်ခံအားကျဆင်းနေသူများတွင် အသက်ရှိသော်လည်း အားပျော့သည့်ရောဂါပိုးပါဝင်သောဆေး မပေးသင့်ပါ။ ဤကာကွယ်ဆေးကို အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီရောဂါကာကွယ်ဆေးနှင့် သို့မဟုတ် အူရောင်ငန်းဖျားရောဂါကာကွယ်ဆေးနှင့် ရောစပ်၍လည်း ရရှိနိုင်သည်။
ပထမဆုံး အသည်းရောင်အသားဝါ အေရောဂါကာကွယ်ဆေးကို ဥရောပနိုင်ငံတွင် (၁၉၉၁)ခုနှစ်တွင် အတည်ပြုခဲ့ပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်အသုံးပြုရန် (၁၉၉၅)ခုနှစ်တွင် ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှ သတ်မှတ်ထားသည့် အခြေခံကျန်းမာရေးစနစ်အတွက် အဓိကလိုအပ်သောဆေးများထဲတွင် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် (၅၀-၁၀ဝ)ဒေါ်လာခန့်ပေးရသည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ ၁.၄ "WHO position paper on hepatitis A vaccines – June 2012." (Jul 13, 2012). Wkly Epidemiol Rec 87 (28/29): 261–76. PMID 22905367.
↑ Ott JJ, Irving G, Wiersma ST (December 2012). "Long-term protective effects of hepatitis A vaccines. A systematic review". Vaccine 31 (1): 3–11. doi:10.1016/j.vaccine.2012.04.104. PMID 22609026.
↑ Hepatitis A In-Short (July 25, 2014)။7December 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ (2012) Nanoparticulate drug delivery perspectives on the transition from laboratory to market, 1. publ., Oxford: Woodhead Pub., 212. ISBN 9781908818195။
↑ 19th WHO Model List of Essential Medicines (April 2015)။ WHO (April 2015)။ May 10, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ (2015) Tarascon Pocket Pharmacopoeia 2015 Deluxe Lab-Coat Edition. Jones & Bartlett Learning, 314. ISBN 9781284057560။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အသည်းရောင်အသားဝါ_အေရောဂါကာကွယ်ဆေး&oldid=293075" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၄ မတ် ၂၀၁၆၊ ၀၁:၂၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။